မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်း | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Education » မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်း
Wed, 2017-09-20 13:43
ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာတော်သင်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မိုင်ယာမီ၌ပြုလုပ်သော နှုတ်ဖြေအစီအစဉ်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − U.S. Embassy Rangoon (FB))
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က နိုင်ငံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံအချို့မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် Reach Oxford Scholarship ဘွဲ့ကြို ပညာသင်ဆုများပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ပညာသင်ဆု အကျုံးဝင် သော ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကောလိပ်များတွင် ရှေးဟောင်းသု တေသနဘာသာရပ်များ၊ ဇီဝနည်းပညာဘာသာရပ်များ၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များ၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ် များ၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ၊ ဥပဒေ၊ သမိုင်းနှင့် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ နှင့် ဂီတအပါအဝင် ဘာသာရပ် ၄၇ ခုကို ရွေးချယ်သင်ယူခွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် တွင် ဆေးပညာရပ်မပါဝင်ပေ။ (ပညာသင်ဆုဖြင့် တက်ရောက်နိုင် သော ဘာသာရပ်များကို http:// www.ox.ac.uk/admissions/ undergraduate/courses-listing? wssl=1 တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာတော်သင် စိုင်းအောင်သိန်းကို မိုင်ယာမီ၌ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − U.S. Embassy Rangoon (FB))
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်း ကျင်သူများအတွက် ဖူးလ်ဘရိုက် အမေရိကန်-အာဆီယံ ဧည့်ပညာရှင် ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်
ဘာသာရပ်တစ်ခုခု၏ ပညာရှင် (သို့မဟုတ်) သက်မွေးပညာရပ်တစ်ခုခု ကျွမ်းကျင်သူ မြန်မာ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ သုတေသန ပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ် အမေရိကန်သံရုံးက ပေးအပ်သော ဖူးလ်ဘရိုက်အမေရိကန်-အာဆီယံ ဧည့်ပညာရှင်ပညာသင်ဆု အစီအစဉ် (Fulbright U.S-ASEAN Visiting Scholar Program)ဖြစ် သည်။
ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာ ကို https://mm.usembassy. gov/education/scholarship- programs/ မှရယူပြီး အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နောက်ဆုံးထားကာ အီးမေးလ်လိပ်စာ Rangoon USECA@state.gov. သို့လည်း ကောင်း၊ အမေရိကန်သံရုံး အမှတ် (၁၁၀) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ကမာရွတ်မြို့နယ်သို့ လည်းကောင်း လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။